ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Apho Celebrate Isitshayina Unyaka Omtsha Aseyurophu
Unyaka omtsha wamatshayina, eyaziwa ngokuba Spring Festival okanye uNyaka oMtsha, sesona siganeko sibalulekileyo kwikhalenda Chinese. Kuba a kwisiganeko esikhethekileyo kuphawulwa usapho byala, amasiko ukudla, neminikelo e iitempile, kunye - Yebo - fireworks. Kukho into ekhethekileyo ukubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina eYurophu. Yinto ithuba elikhethekileyo inxaxheba lakudala Chinese, eyaqala 4000 iminyaka. Musa kuphoswa kuyo xa nethuba!
No.1 for Celebrate Chinese New Year eYurophu | Madrid, Speyin
Ityeli wesithathu, ikomkhulu Spanish yile ndawo Bhiyozela Chinese Unyaka Omtsha eYurophu e Spain, nenkqubo yenkcubeko festive eququzelelwe Chinese Embassy. Ikonsathi, workshops, kwimiju- street, yaye imizila ezizwe ziya kuba zonke yinxalenye kwimibhiyozo eyayibanjelwe kwisithili Usera - ikhaya Chinatown Madrid kaThixo.
IParis nje kwimiju- malunga zala maxesha kunye nezinto nokuhombisa ezineenkcukacha nangona. imfihlo okusemandleni alo-igcinwe kule xesha iitempile ezimbini dha ibekwe kwisithili 13. Nazi iintsapho ezivela China, Viyethnam, kunye Cambodia beze ukuhlawula imbeko yabo kwaye samkela kwi Nyaka omtsha. Nandipha imiboniso zobugcisa Chinese nobugcisa, ukupheka, kunye nomdaniso wesintu kunye umculo. Bona isixeko kwezibane ngokwenene siphile ngokuvisisana negama layo eli xesha lonyaka. Kwaye eyona nto intle unako uhambo ngololiwe ukusuka eParis ku Amsterdam kwaye babhiyozele kuzo zombini emizini!
Masonwabe iqiniso: District Amsterdam kaThixo bango Red-Ukukhanya likhaya itempile yokwenene dha. Qho ngonyaka, Ungawubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina eYurophu eAmsterdam nakwiindawo ezijikeleze iThe Fo rachel Shan He Hua nenkqubo ekhethekileyo.
London England ithatha ngokuqhayisa eziwudibanisayo ndlela inkulu ehlabathini ukuba babhiyozele Chinese Year New eYurophu, ngaphandle kwe Asia. ke, kanjalo, le yeyokubetha xa ubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina eYurophu.
Esi sixeko ibamba yosuku olunye i- festival ngqi igcwele kwimisebenzi kubandakanya ukutya zemveli, i ekundleni yonyaka, imisebenzi, kunye nemisebenzi yobugcisa bemveli. (Wena ke nathi ukutya zemveli!) Bala nathi!
Kukho iindawo ezintathu eziphambili eNgilani ezibambe le mibhiyozo; Trafalgar Square, IChinatown, kunye neShaftesbury Avenue. Ngamnye wahlukile kwimisebenzi ethile kwaye iziganeko banikela; iindwendwe kuya kuba ngokukhetha ixesha nzima ukuze wenze.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina eYurophu kwaye uye kwesinye sezi zixeko? Ngololiwe, kanjalo! Sebenzisa SaveATrain babhukishe le engcono ngemizuzu!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-chinese-new-year-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)